Irish Whiskey Academy kanye Midleton Distillery – Emzaneni ngoMoya
Ubaba wami walithanda Scammell Amaloli. Lesi obala ngesikhathi Jameson Experience Isivakashi Center ku Midleton Distillery.
Esikhathini yasemakhaya Ireland kwawo-1950, Scammels zinto ziwuphawu konke okwakungokwayo best isizwe ekuthuthukiseni. Yibona amaloli giant ezaziletha ubuchwepheshe besimanje ukuze Ireland futhi kwakufanekisela amandla intuthuko izinkampani ezifana Jameson okuyinto ngisho ke ukuthi kakade wayesenezinsuku ekupheleni ahlabayo emisha Irish kanye nezimboni ze-eminyakeni eyikhulu. Scammels kanye ezintsha Ireland entsha besenkolweni, izingane ezincane ephefumulelwe like ubaba babe onjiniyela nososayensi we 60 eyakha Ireland yesimanje ezako 50 iminyaka esikhundleni isitimu, steel, boilerplate nethusi okumile nge electronics ne-silicon.
Ukuze ke ningalenzi iphutha, embonini Whisky wawubhekwa njengendawo zonke kancane njengoba ezintsha futhi lesichubekako ke njengoba Silicon Valley namuhla. Imboni Whisky leapt isandla phambili esandleni ne Ubudala Intuthu. Intuthuko kubhayela nogwali ekwenziweni kwaholela kangcono iyashelela zethusi imbiza okumile, okumile Ikholomu futhi distillery ubunjiniyela. Intuthu izinjini kungaba isinyathelo lapho ehlobo ezomile okumisiwe amatshe okugaya amasondo okuphehla amandla ngamanzi futhi kwaba obhekwe umusi amakhanda futhi umusi izikebhe alethwe nogologo izilaleli ebanzi eYurophu nase Melika okwenza kube ukuhambisa kwempahla ebalulekile UK nase-Ireland.
Namuhla, ekudalweni Whisky encompasses, isayensi, art, ubunjiniyela, ifa, ezolimo, ubuciko, emisha, ibhizinisi futhi kunayo yonke nokwazisa abanothando komkhiqizo nokuqhosha ukuxhumana okuqinile ukuba esidlule. whiskey Irish, ngokungafani Scotch nogologo Namanje acatshangelwe namuhla ngendlela efanayo njengoba kwakunjalo phezu 200 iminyaka edlule, ngobuchwepheshe akabonaze ​​abavumele ukuyekethisa kulondolozwe ifa, ukunambitheka kanye izinga.
Irish Whiskey Academy Ama-Blogger futhi Izintatheli
Ngijoyine nedlanzana nabo Whisky izintatheli ezivela UK, Ireland naseNetherlands abaye zonke bamenyelwe ahlale izinsuku ezimbalwa njengoba izivakashi Irish Distillers at umkhiqizo wabo omusha Irish Whiskey Academy exhunywe Jameson Irish Whiskey Experience at Midelton yabo Distillery eduze Cork. Ihhotela lethu kuze kuphele isikhathi ukuvakasha iyona lovely Castlemartyr kuyona okuyinto nje kms ambalwa kusukela Distillery.
Ngemva kokuthi i-ophihliza iqhwa of Redbreast 15, sisuke sihlanganyela abasebenzi Irish Whiskey Academy for kwasemini ngesikhathi Indawo yokudlela Malt House e Jameson Isikhungo sesivakashi. Lapha, sihlangana khona noDavide McCabe ababeyoba isibonelo sethu umfundisi ngenkambo futhi Kelly O'Mahony ngubani Experience Customer Manager. Ngisho phezu kwasemini, kwakusobala ukuthi thina babesebenzelana nabantu nje abanothando umsebenzi wabo.
Kelly ichaza indlela ngisho izakhiwo ezinkulu kangaka ezifana Midleton, nge ukuxuba yayo Imiphumela eziyinkimbinkimbi zezimboni kanye nezinsizakalo ezokuvakasha ngempela emzaneni. Emzaneni emoyeni? mina ibhizinisi. Ekupheleni lolu hambo ngingathanda baqaphele ilungelo nje indlela thina bobabili..
Siqala emva kwasemini okusheshayo orientation uhambo distillery ubudala kuhlanganise look at the ubudala Tile perforated Malting emabhilidini, waterwheel, umusi injini nalokho okucatshangwa ukuthi ibhodwe elikhulu namanje emhlabeni. Kwakusahlala distilling umoya Midleton kuze kube muva nje ngemva phezu 100 iminyaka yesevisi, kuphela ukuba kubekwe brand new isifaniselo yesimanje eminyakeni embalwa edlule. Whisky ekwenziweni ayikashintshi ngempela kangako phezu 200 iminyaka ngakho uma kungenziwanga waphula, musa ukukulungisa.
Ngemva obligatory ekilasini isithombe uphawu ngaphandle Academy, singena isimo art wokwakha Academy okuyinto iyisonto umsindo ubuchwepheshe ultra-yanamuhla ezibukwayo, ziphuzo zazihluzwa ayo futhi ukukhanya isayensi lab futhi Yebo ezihlotshiswe kahle yokunambitha lounge okusikhumbuza ezinye amakilabhu posher eDublin London. Futhi uMfundisi? umfundisi wethu Dave McCabe kusobala ukuthi indoda ophila, kuheleza uthanda nogologo yakhe! Bathi kuloku ukugcizelela ubumnandi ukuphila nokufunda kanye Dave kusobala ungomunye walabo othisha. Kakade ngiyazi ukuthi ezinsukwini ezimbalwa ezizayo abazobe ngakujabulela kanye nokuba ulwazi!
Kelly wayethathe Usitshele siyobe elandelayo ekwenziweni nogologo kusukela wokusanhlamvu ingilazi, ngakho ngokwemvelo saqala ne Umlimi ikhula ukuthi okusanhlamvu. Abanaso empeleni ukhulume abalimi sokuqeqesha kodwa kunalokho mayelana 140 Farming Imindeni ehlakazekile emhlabeni Munster abanikeza 60 amathani usuku ibhali Midleton.
Kusukela lapho, sadabula Ibhali izinga, uhlole ibhali malted futhi wasebenza indlela yethu kuze kube Milling, mashing futhi uthuthuva le 10% ABV Weiss ubhiya efana "wort" okuzokwenza ekugcineni distilled ku nogologo umoya ngamaqoqo ka 116,000 litha isikhathi.
Irish Whiskey Academy ziphuzo zazihluzwa Class ne-Irish Whiskey Academy Dave McCabe
Thina wathuthela ukutadishwa ziphuzo zazihluzwa, esehlanganise butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela imbiza kathathu namanje ziphuzo zazihluzwa kuhlanganise yobuciko nesayensi ziphuzo zazihluzwa feints nokuncishiswa phambi sidlulela Coffey Namanje noma Ikholomu Namanje ziphuzo zazihluzwa elihlobene ne-ukuxegiselwa okusanhlamvu umoya owodwa okuyinto yengezwe imbiza namanje ukwenza whiskeys lighter imnandi ezihlangene.
Thina sabe sesidlulela ekutadisheni nokuvuthwa okuyinto ubuciko ukuguga nogologo e emiphongolweni lokhuni noma imiphongolo. Hhayi nje iyiphi emgqonyeni elidala, kodwa ngokukhethekile amazwe olulodwa ukusetshenziswa Bourbon emiphongolweni kusukela Kentucky ngesikhathi $120 ngamunye kanye ezikhethiwe uSherry Malaga Iwayini emiphongolweni kusukela eningizimu yeSpain kubiza phezu € 700 ngasinye 5,000 esetshenziswa ngonyaka.
Izwi "Umndeni" lalisetshenziswa, njengoba cishe zonke eziyigugu Spanish Sherry emiphongolweni itholakala kusukela emndenini ibhizinisi elilodwa eduze Jerez. Don Antonio Paez Lobato kahle phezu 80 futhi namanje ngenkuthalo ilawula cooperage umndeni. Ubuhlobo bakhe ne Midleton Umkhaya luqinile futhi sikhuthazela. Ngakho kangangokuba Midleton Master Cooper thela Buckley ithumela ngokoqobo yakhe phezu baye eSpain lomsebenzi Abazukulu Don Antonio aye aba Ireland umsebenzi nesipiliyoni Midleton.
Kwase kuyisikhathi sokuba ikhefu emsebenzini Class ngakho sacelwa phansi kulawo lounge yokunambitha ukunambitheka 4 ezahlukene kakhulu Embizeni Namanje whiskeys kusukela Midleton.
Oyisimanga Green Spot sekuyisikhathi eside okuyinto kube siqu ozithandayo nogologo yami Irish.
Redbreast 12 nonyaka ubudala nge emangalisayo sherry emgqonyeni flavour yayo Christmassy.
Amandla Johns Lane non obandayo elicwengekileyo nge esiphelweni saso Spicy ezomile.
Legacy Barry Crockett Cha kudingeka bathi angaphezu kuka-ke ebizwa ngegama lika-Master!
Midleton Embizeni Namanje Irish Whiskey zokuhlolwa
Kusukela lapho, kwase kuyisikhathi sokuba agcizelele ekufundeni kwethu evakashele ukukhiqizwa isitshalo yesimanje. Lapha, sabona ngakwesokunene lokuqala ukulethwa isezingeni eliphakeme zebhali kanye mashing, ukuphisa futhi zokuhlunga inqubo. Thina edlula omkhulu, ngaphandle selehlile ongaphandle ikholomu okumile okuyinto distill olulodwa okusanhlamvu nogologo umoya ngoba ukukhanya endleleni yethu ukuvakashela gqamisa kosuku, omkhulu Embizeni Namanje ihholo. Kube ukusitshela mayelana omkhulu imishini zethusi wonder, kwakunguJesu kodwa siqu Master Distiller Brian Nation Midleton sika ezathatha phezu kusuka kokuyeka Master, Barry Crockett e 2013. Lokhu izilaleli wedwa ngabe ngenze uhambo ngathi njengoba lokhu kukhona indoda egama layo uzothatha indawo ka-Barry nganoma isiphi ibhodlela elilodwa Midleton Whisky Ezingavamile kakhulu ekhiqizwa phakathi nokubusa kwakhe. Kwaba Kuyathakazelisa ukuphawula njengoba sahambahamba Embizeni enkulu Namanje ihholo, ukuthi isikhala ushiywe ngoba ithimba ezintathu zethusi imbiza okumile wesibili ukuthi ajoyine ithimba esikhathini esizayo esiseduze. Lokhu kuzokwenza kabili imbiza ukukhiqizwa namanje nogologo ngesikhathi Midleton isitshalo.
Irish Whiskey Academy Tutor uDavide McCabe libonisa off the Giant yethusi Embizeni Stills efakwe ngonyaka odlule. Three ngaphezulu ngenxa afakwe ilungelo isithombe.
Ngalobo busuku, phezu ehlezi ekudleni Ballymaloe endlini eseduze ne-Master Midleton sika nokuvuthwa Kevin O'Gorman, umfundisi wethu uDavide sezikhundleni lokumaketha team Midleton sika, Ngaphinde got umuzwa langempela lokuthi lokhu omkhulu Pernod Ricard ephethwe Midleton inhlangano namanje enhliziyweni, operation Irish kakhulu ngisho okubaluleke, Ngiphuma kulowo muzwa kusihlwa ukuthi ngangikade ngisemhlanganweni isidlo santambama ibhizinisi elincane Irish Umkhaya kunokuba igatsha ibhizinisi elikhulu lezizwe ezihlukahlukene. Othile eliphezulu kakhulu phezulu Pernod Ricard uye benza ngokuhlakanipha, bakhetha ukuthi uma kuziwa ekwenteni kahle kakhulu kulokunye Irish nogologo amaqembu, uma kungenziwanga waphula, ke musa ukukulungisa!
Ngakusasa ekuseni thina bekuya egqamile futhi ekuqaleni kuka ukuchitha ihora nge Midleton sika thela Buckley ngubani 5th isizukulwane Master Cooper. Njengoba thina kakade uDavide, Midleton uzongenisa zonke imiphongolo yabo kusukela Kentucky naseSpain. emgqonyeni ngamunye Nokho is izinga zihlolwe ekufikeni ngu thela noma omunye nethimba lakhe elincane Cooper abangakwazi ukukhanda imiphongolo abahlubukayo usebenzisa amathuluzi kanye namasu ezithinta zihlala zinjalo izinkulungwane zeminyaka, eyadluliselwa isuka ubaba endodaneni. Anginayo isikhala kule ucezu ibhulogi ukuze ayicacise kahle ihora emangalisayo sachitha eklasini thela sika, kodwa iphuzu elafika ekhaya ngempela kimi ukuthi Master Cooper akuyona nje Cooper kakhulu, Kumele futhi abe umfundisi omuhle noma 'Professor' nge ikhono adlule indinganiso zobungcweti ukuze Cooper nje entsha, kodwa isizukulwane esisha Cooper. siqu angamagagu thela semvelo sokufuna ukufundisa kuyinto umaqondana ngobuqhawe bakhe wobuciko kanye lobuchwepheshe kanye lokhu ubelokhu eqashelwa ochungechungeni Midleton sika izinkulumo isiqophi YouTube afaka Master esenzweni.
Midleton Master Cooper thela Buckley kusitshela zonke mayelana izikebhe of Cooperage lasendulo, ishintshe amathuluzi kanye mkhuba 1,000 sika zeminyaka.
Kwakungeve kumnandi ukuba semhlanganweni lo zokuhlolwa Lounge nge siqu Archivist Midleton professional uCarol Quinn balandela futhi futhi umyalezo ngathatha kusuka inkulumo yakhe kithi kwaba yoxhumano phakathi ifa, ibhizinisi kanye nomndeni ukuthi oko futhi namanje manje kakhulu okushiwo Midleton distillery. Sanikezwa ukufinyelela eliyingqayizivele umthombo oyinhloko imibhalo kuhlanganise itayitela wokugubha inikezwe imvume kuya distillery by odumile wokujikeleza umdayisi Midleton futhi bonke "uhlamvu" round Paddy O'Flaherty ukudayisa uphawu egameni lakhe kuze Paddy Whisky 101 iminyaka edlule.
Ngemva olunemininingwane ethe xaxa ekilasini mhlangano ziphuzo zazihluzwa ikholomu esetshenziswa ukwenza olulodwa okusanhlamvu nogologo elisetshenziswa whiskeys Midleton sika ezihlangene, samenywa ukuba yokunambitha of Jameson sika Premium imisindvo.
Jameson Standard zazo 5 Million amacala unyaka ngamunye kwenziwa zokusabalalisa emhlabeni wonke. A nhlanganisela imbiza namanje futhi olulodwa okusanhlamvu nogologo wavuthwa e Bourbon futhi sherry emiphongolweni.
Jameson Khetha Reserve Black Wemigqomo Iqoqwana Small wavuthwa e emiphongolweni akhethiwe okuye extra ushiswe ithimba thela Buckley ngemva kokufika e Midleton. Uphiko Grain awuvamile ngenxa yokuthi ziphuzo zazihluzwa yayo yokuqala ngo imbiza namanje kulandele evamile ezimbili ikholomu namanje distillations elihlobene ne kathathu distilled olulodwa okusanhlamvu whiskey.
Jameson Igolide siyinhlanganisela ezintathu okusanhlamvu Single futhi imbiza namanje whiskeys kusukela 14 ukuze 25 ubudala, omunye eye abaneminyaka e intombi kwesihlahla se-okhi abolekise vanilla noshukela imbiza namanje ekhaleni okubabayo futhi peppery futhi ethambile oloroso fruitiness.
Jameson 18 Unyaka Old Limited Reserve siyinhlanganisela ENkosini Distillers sherry sezithathiwe Bourbon emiphongolweni oneminyaka engu-okungenakuthiwa angaphansi kuka 18 ubudala. Ingxube lokugcina ke abaneminyaka isikhathi okunye kuqala yokugcwalisa Bourbon imiphongolo ngaphambi kokuba igcwaliswe uyibanga elilinganiselwe serial olunezinombolo amabhodlela. Umkhiqizo okuphelele mellow ngokumangalisayo eziyinkimbinkimbi nge sekugcineni lovely eside futhi elibala.
Irish Whiskey Academy Ukuvakashela e-Warehouse ka enkulu 42. Ukuhogela Abelana iNgelosi sika!
Ngaphambi kwasemini, thina babeneshabhu ihora elilodwa ku nokuvuthwa noma ukuguga kagavini e emiphongolweni. Ngemva kokubona indlela emiphongolweni bevela Kentucky naseSpain, esasizibukela wokuhlola, ukulungisa kanye ukugcwaliswa inqubo ngaphambi kokujoyina Master Midleton sika nokuvuthwa Kevin O'Gorman bavakashile ekhetheke kakhulu-Warehouse ka 42 lapho Ngavunyelwa ukwambula ukuvula cask uphawu ka 15 ngonyaka nogologo ubudala ukuhlola intuthuko yayo 3 iminyaka kusukela bottling ngokusebenzisa valinch noma enkulu zethusi nogologo pipette ukugcwalisa engangifunda nazo izibuko ukuze izimpahla esiyingqayizivele amandla cask yokunambitha. Kamuva, phezu kwasemini, Thela Buckley sisayinwe the Bung mina ekhishwe kusukela emgqonyeni njengoba Memento ekhethekile kakhulu ukuvakasha.
Ngemva kwasemini kwaba isikhathi ukubeka zonke esasikufunde kule ezinsukwini ezimbili zokugcina zomhlangano ku umkhuba kanye nesigaba kanye nesayensi lab okungokoqobo art kagavini kwendingilizi. Sibe ukufinyelela tinhlobo letehlukene tetintfo letingemadayimenshini Embizeni oneminyaka engu-Namanje futhi Single Grain Whiskeys wavuthwa ezihlukahlukene emiphongolweni ezahlukene. Futhi umphumela? I eziyivelakancane nogologo Irish eyake yaba khona. A batch encane (70 ml) ufane ngu osafunda Midleton yakamuva Whisky Blender uStuart McNamara!
Kwakuphakathi nesikhathi ukuqeda Yiqiniso bathi revoir au ukuba abangane bethu abasha e Midleton. Kodwa ngaphambi kokuba sihambe wamuka Midleton njengoba abafundi abaphothule lo Irish Whiskey Academy yakamuva, sase ngamunye ekhishelwe ekhiqizwa anguye Irish Whiskey Academy inhlukano ngamunye elalibe ngamunye serial olunezinombolo futhi ngezifiso negama lethu.
Kwangimangaza ukubona ukuthi ingakanani ngifunda ngalesi ukuvakashelwa olunzulu kodwa kujabulise kakhulu. Asikho isikhala esanele noma nini kule blog iDemo ukuya imininingwane zikanokusho amakilasi kodwa mina izolandela ukufika emasontweni nge-athikili amaningi enemininingwane ngabanye.
Angingabazi ukuthi ulwazi, izinkumbulo futhi zathola okuhlangenwe nakho futhi ubungane abakha engifunda nabo futhi Midleton "Umndeni" uyohlala nami ngoba lonke yami Whisky ngokubhala umsebenzi. Kwaba ukuqonda okuvelele konke kuhamba phambili mayelana Irish Whiskey Umhlaba.
4 Famous Midleton Embizeni Namanje Whiskeys futhi yakamuva Iqoqwana Small Ngempela Irish Whiskey Blend uStuart sika.
Njengoba umuntu abanezizinda professional ukuqeqeshwa nokufundiswa e Whisky empilweni yami non, Kwangihlaba umxhwele kakhulu iinkghonakalisi oncomekayo nemigomo yoqeqesho e sokuqeqesha. Kodwa ngaphezu kwakho konke Ngahlatshwa umxhwele izisebenzi Irish Whiskey Academy. Kuyinto abantu njengoDavide, inikeza, Kelly, UCarol futhi Kevin ngubani ngempela amandla lokhu Distillery kanye brand ayo. Nabantu ithalente ezifana, ukuzinikela kanye nogqozi, Ngokuzayo we Irish nogologo umkhakha kusezandleni ephephile kakhulu ezizukulwaneni eziningi ezizayo.
Uma ungathanda lokuphuza izimangaliso Irish Whiskey Academy ngokwakho, hlola www.IrishWhiskeyAcademy.com . Sinenkosi uhla 4 izifundo esukela 2 amahora Irish Whiskey Academy Experience for € 59, i ntambama ngesikhathi Irish Whiskey Academy for € 175, usuku lonke Irish Whiskey Academy Owathola wephakheji € 325 kanye ezimbili ngosuku Irish Whiskey Academy okuhlangenwe nakho € 1.199 kuhlanganise 5* Ihhotela yokuhlala kanye isingathwe idina kusihlwa e-premium yokudlela wendawo.
Stuart McNamara kuyinto Irish Whiskey-Blogger futhi Umqondisi IrishWhiskey.com futhi IrishWhiskey.Fr.